HS:- Dad badan ayaa u maleeya in shacabka Somaliyeed neceyb gaar ah u qabaan magaalada Mogadishu,taasi oo beelo badan Somaliyeed iskaka haajireen dharaar cad iyagoo weliba Ku lahaa hanti ma guurto ah.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa iney Somali badan la yaabaan muuqaal dhawaan laga duubay ganacsade Cabdi Xoosh oo runtii madaxweynaha hada jira Ku tilmaamay shaqsi maskaxda ka jiran,mar uu u nasteexeynayey beelaha sida gaarka ah isku laheysiiya caasimada Somaliya ee Mogdishu,walow ay iyagu isku maleeyaan in aflagaadeeyey.
Xaqiiqadii dhaqanada siyaasadeed ee aadka u foosha xun ee maanta yaalo Mogdishu ma ahan mid ay Ku qanci karaan Somaliweyn in sanadkaan Mogadishu Marti geliso doorashada madaxtinimada Somaliya.
Hadaad u fiirsato qaabka ay u shaqeeyaan gudiga loogu yeeray gudiga doorashada ee uu madaxweynahu sameystay kedibna madaxda uga dhigay mid ka mid ah la taliyayaashiisa ee xitaa garan waayeen Iney madaxweynahan ay siyaasadiisu fashilka dhaaftay ee waashay welina isla saxan kaliya si uu u helo mudo kordhin iney dhihi waayaan ugu yaraan.
War waxaani aad sameyneyso waa ceeb ee jooji siyaasiyiintaan caasimadiii Somaliya kaaka kala tagayo iyo shacabkan aad cidii kaa soo jorjeedaba aad Hotelada ugu galeyso waxaani waa qeyrul masuulnimo xumee.taasi bedelkeeda maadaama uu isagu soo magacaawday wax kale kama hadlaan oo aan ka aheyn siduu mudo kordhin Ku heli lahaa maadaama aysan jirin cid maanta Xasan Sheikh xil qaran mar danbe Ku aamineyso marka loo eego dhaawaca siyaasadeed iyo qaran jabka Ku dhacay Somaliweyn 4tii sano ee uu joogay.
Hadaba iyadoo ay arimahaasi oo dhan jiraan si loo helo magaalo kale oo aan aheyn Mogdishu oo lagu qabto doorashada waxey beesha caalamka Sahan Ku wadaan dhawr magaalo oo dalka ka mida midood tan Ku haboon in doorasho lagu qabto.
Arinta kale ee ay Somali badankeed dharaar cad Ku kala tagi doonaan waa maalinta meel lala soo istaago in madaxweynaha waqtigiisa hal maalin loogu daro oo uu bulshada sii horjoogo waxii ka danbeeya Sept 10/2016 waayo isagaa si kutalo gal ah u hor istaagay wax badan oo la qaban karay waqti hore.
Ugu danbeyna mudo 26 sano oo colaado ah dalka Somaliya waxuu mar kale foolanayaa Civil War waa hadii doorashu Ku dhiciweyso mudadii loogu talo galay waayo madaxweynaha waxaa bishii soo gala dhaqaalo lagu qiyaasay 5 million oo dolar gudiga doorashada uu sameystayne waxey u raadinayaan mudo kordhin oo ma doonayo inuu doorasho galo,waayo dareenka shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan ayuu ogyahay.
Isku soo duuboo Mogdishu inta uu masuuliyad sheeganayo madaxweyne Xasan Sheikh ma ahan magaalo lagu aamini karo iney ka dhacdo doorasho,waxeyna noqon doontaa meel lagu bar tilmaameedsado musharaxiinta badankoodna weyba iskaka carareen.
Marka aanu leenahay beesha caalamka iyo midowga Africa ayaa jiheynayo doorashada sanadkaan dad badan waxey moodaan mid qiyaali ah,dalka kama jiro gudi doorasho kaliya waxaa hada Mogdishu Ku sugan gudi uu hogaaminayo la taliyaha madaxweynaha oo loogu yeeray gudiga doorashada heer federal.
Mogdishu ma ahan caasimadii Somaliya ee berisamaadkii Somali oo dhan ka dhaxeysay amaba magaalo ay Somali u siman tahay weyna adag tahay in ay mar kale kulmiso Somaliweyn marka loo eego dhaqanada aadka u foosha xun ee maanta yaalo iyo siyaasadaha guracan ee madaxweynaha dhawaane waxaa siweyn loo dareemi doonaa hoos u dhac qiimaha la kala siisto guryaha, waayo Mogadishu waxey magaalo Ku aheyd Somaliweyn,hadase inta hantidooda kala baxeysa ma yara iney dhistaan iska daaye.
Dhawaan naga fill magaalooyinka loo badinayo midood iney doorashada ka dhacdo 2016.
· admin on July 30 2016 10:21:14 · 0 Comments · 1190 Reads ·
14,934,271 unique visits